Bazobuyela ngokugcwele ezikoleni abafundi bamabanga aphansi - Ilanga News
Home Izindaba Bazobuyela ngokugcwele ezikoleni abafundi bamabanga aphansi
Bazobuyela ngokugcwele ezikoleni abafundi bamabanga aphansi
Isigungu esilawula izikole kuzwelonke sikhonondile ngohlelo lokushintshana emakilasini
NgUNGQONGQOSHE wezeMfundo eyisiSekelo uNkk ANgie Motshekga.
IGCINDEZI yesigungu esilawula izikole kuzwelonke kuthiwa yiyona eholele ekutheni uMnyango wezeMfundo eyisiSekelo uvume uku-ba abafundi bezikole zamabanga aphansi ba-buyele ngothi lwabo ezikoleni ngoNtulikazi (July).
Lesi sinyathelo okuthiwa sithathwe ngoba ucwaningo luveza ukuthi izingane ezineminyaka ewu-12 ubudala kuya phansi kazihlukunyezwa kalula yileli gciwane kuthiwa sidale ukuba kukhulunywe eyokuphuthumisa ukugoma othisha njengoba kunovalo ngokugadla kwesishingishane sesithathu seCoronavirus (edala iCovid-19).
Eyokubuyela kwabafundi ezikoleni ngothi lwabo, ishicilelwe ku-Somqulu kaHulumeni (Government Gazette) nguNgqongqoshe weze-Mfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga, othe abafundi bakaGrade R kuya kuGrade-7 bangabu-yela bonke mhla ka-26 kuNtulikazi.
UMnu Ndo Mantakanyane onguNobhala Jikelele we-National Association of School Governing Bodies, okuyisigungu esilawula izikole kuzwelonke, utshele ILANGA ukuthi lesi sinqumo sithathwe ngenxa yokuthi bakhonondile kungqongqoshe ngokuthi kayikho into efundwa yizingane ngalolu hlelo lokuya ngokushintshana ezikoleni.
“Abantwana baya esikoleni kanye esontweni bese beqisa amasonto, okuyinto ebabuyisela emuva kakhulu. Izingane zizobhekana nenkinga emabangeni alandelayo uma kuzoqhubeka kanjena,” kusho uMnu Mantakanyana.
Uthi bakubeke kwacaca emnyangweni ukuthi ukuphepha kwabantwana kubalulekile, ngakhoke kumele kuqikelelwe ukuthi izinsiza-kuvikela zezempilo zihlinzekiwe ezikoleni. Ngaphandle komhla ka-26 kuNtulikazi, oshicilelweni lukaNkk Motshekga kusomqulu kahulumeni, kuvela ukuthi izikole ezinamakilasi amancane ngokwesibalo kumele zifundisele endaweni evulekile, uma kusekilasini abafundi bangagcogcomi ukuze kugwemeke ukusabalala kweCoronavirus.
Mayelana nokugonywa kothisha, uNkk Motshekga uthe ukusatshalaliswa kwemigomo bakwenza ngokubambisana noMnyango weze-Mpilo.
“Ukubuyela kwabafundi ezikoleni ngokugcwele kuzoncika ekuthe-ni impilo yabo isengcupheni kangakanani,” kusho uNkk Motshe-kga.
Ibambamengameli leNatu, uMnu Sbusiso Malinga, lithe bayakweseka kakhulu ukubuyiselwa kwabafundi ngokugcwele ezikoleni kodwa uma kulandelwa imigomo yezokuphepha kwabo.
Previous articleuBenni unqobe esomqeqeshi ovelele kwi-DSTV PREMIERSHIP
Next articleKwehlukene imibono kushona uTP Joshua